हो सॉंच्चै आज मलाइ भिख माग्नु छ « Dhankuta Khabar
समय : 3:07 AM
-आशिष लिम्बू ।
हो ! सॉंचै आज मलाइ भिख माग्नु मन छ । देशमा एउटा सुन्दर अनि गौरवमय इतिहास रच्न । नेपाली जनताको चन्दाले बनेको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा सहयोग गर्न । देशको नाममा गरेका ती खेलाडीहरुको संघर्ष र मेहनतको पछिल्लो समयको सफलताको सम्मान र कदर गर्न ।
सॉंचै मलाइ आज भिखारी हुन मन छ । अनि भिख माग्नु मन छ । मेरो हातहरु लम्पसार बनाएर सबैको सामु मलाइ एक-एक पैसाको जोहो गर्नु मन छ । मलाइ कति पनि लाज महसुस भएको छैन । मेरा हात पाउँ सबल हुदॉंहुदै कि म भिख माग्न लागिरहेको छु । किन कि सरकारको लज्जास्पद काम गर्ने बानीले सायद मलाइ पनि केही हदसम्म सिकाएको छ । म लाचार हुन तयार छु । किनकी सरकारले देखाएको लाचारीपनले ममा अब त बानी परिसक्यो । देशको सरकार भिखारी छ । म पनि यही देशको नागरिक भएकोले भिखारी हुन कुनचै ठूलो चुनौति भो र मलाइ आफ्नो राष्ट्रलाइ चिनाउने चिनारीको धरोहर खड़ा गर्न । त्यो पनि आफ्नै मातृभूमिमा बिदेशी खेलाडीहरुको आगमनलाइ स्वागत सत्कार गर्न ।
नेपालीपनको सद्भाव र सौहार्दपूर्ण व्यबहारसंगै मनमोहक वातावरणबाट अनन्तसम्म आकर्षित गर्न एउटा छुट्टै नामले चिनाउनु छ देशलाइ । विदेशी भूमिमा बगाएको पसिनाले आर्जेको ती पैसाहरुको के नै महत्व रह्यो र यहॉं ती राज्यको ढिकुटीबाट अरबौं घोटाला गर्नेहरुको अगाडी । म लाख कमाउँछु होला महिनामा तर सरकारमा बस्नेले करोड मात्र होइन अरबौं कमाएका छन् ।
एउटा रंगशाला बनाउनु करिब साडे ३ अर्बको बजेट तय गरिन्छ गरिब जनताबाट । अनि एउटा बिमान किन्दा साडे ४ अर्बभन्दामाथि भ्रष्टाचार र घोटाला हुन्छ सरकारबाट । आफ्नै मातृभूमि आमाको पेटमा लात हान्नेहरुको अगाडी मलाइ भिख माग्नु कुन चै लज्जास्पद कुरा भो र ।
३ करोड जनताले चुनेर देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात र भौतिक सरंचनाको विकास र मुलुकको समृद्दीको मुहार फेर्न पठाएका ती सभासद्, मन्त्रि भनौदाहरुलाइ आफ्नो दुनो सोझ्याउनु मात्र ठिक्क छ । लाग्छ अहिले आएर उल्टै गरिब जनतासंग एउटा रंगशाला निर्माणको लागि भिख माग्नु पठाए जस्तो ।
हिजो जनतासंग भोटको भिख मागेर अहिले ती घुम्ने कुर्सीमा बसेर भिग मागिरहेको देख्दा म अचम्मित हैन हर्षित छु । किनकि सरकार पनि आज आएर गरिब जनताको पाइताला मुनि टॉंसिएको धुलो बराबर र छ भन्ने भान भएर ।
हो, आज देशले श्रमिक बनाएर खाडीमा नबेचिएको भए, भालेको डाकमा सबैरै गएर भिख माग्नु मन छ । ती शितल निवास, सिंहदरबार अनि उच्च ओहदामा बस्नेहरुको कार्यालयको गेटमा बसेर एउटा हातमा टोकडी र अर्को हातमा “अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट रंगशाला
सहयोग अभियान”को ब्यानर बोकेर भन्ने थिए मानानीय मन्त्रिज्यू ! तपाइले भ्रष्टाचार गर्नु भएको एक चौथाई रकममात्र छुट्याएर चन्दा दिनुस् हाम्रो गौरवमय निर्माणाधीन रंगशालाको निर्माण हुनेछ । बिचरा गरिब जनताहरुको चंन्दाको आस त गर्नु पर्ने थिेएन ।